စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA ရဲ့ နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ အခြေအနေကို ဆက်ပြီးတင်ပြပေးသွားပါမယ် –
လက်ရှိအခြေအနေမှာ PEPENG လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အမည်ပေးထားပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည် PARMA လို့ ပေးထားတဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာ Bicol ရဲ့ အရှေ့ဘက် Caramon နဲ့ ၃၁၅ မိုင်အကွာအဝေးကိုရောက်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ (ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရံ့ ပြည်နယ်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက မိတ်ဆွေတွေ ရင်းနှီးမှုမရှိပေမဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်း/အသိမိတ်ဆွေရှိသူတွေများ ပါခဲ့ရင် နေရာဒေသကို သိနိုင်အောင်လို့ ဖေါ်ပြပေးတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။)
Catanduanes and Camarines ခရိုင်တွေမှာ အခုဆိုရင် မိုးကြီးနေတဲ့အကြောင်း တစ်နာရီကို ၂၂ဝကီလိုမီတာမှ ၂၇ဝ ကီလိုမီတာ (၁၃၆ မိုင်မှ ၁၆၇ မိုင်နှုန်း) ရှိတဲ့လေပြင်းများတိုက်ခတ်မဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အကြောင်း T2K ရဲ့ နာရီစဉ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖေါ်ပြနေပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Naga မြို့ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၃၅ဝ ခန့် (မိုင် ၂၂ဝ ခန့်) မှ စူပါမုန်တိုင်း PARMA ရဲ့ ဗဟို (မုန်တိုင်း မျက်စေ့) ဖြတ်ကျော်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ T2K ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖေါ်ပြနေပါတယ်။
မနေ့က ခန့်မှန်းချက်အတိုင်း Isabela or Cagayan ဒေသမှာ ပထမအကြိမ် ကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှာဖြစ်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဘက်ကို ဆက်လက်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း JTWC ရဲ့ နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ track ပုံမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။ သူဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မဲ့အချိန်တွေနဲ့ တည်နေရာခန့်မှန်းချက်တွေကို အောက်ပုံမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက် – 1200 GMT(1200Z) ခန့်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Isabela or Cagayan ဒေသမှာ ပထမအကြိမ်ကုန်းတွင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက် – အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့ 00 GMT(00 hr Z) မှာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မြန်မာစံတော်ချိန်အတွက် GMT သို့မဟုတ် Z hr ကို ၆ နာရီခွဲ ပေါင်းပြီး တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်)
နိုင်ငံ ၆ နိုင်ငံက ခန့်မှန်းတွက်ချက်တဲ့ လမ်းကြောင်းပြပုံမှာတော့ မနေ့ကထက်စာရင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဘက်ကို ပိုမိုနီးကပ်လာတာတွေ့ရပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို ဦးတည်ထွက်ခွာဦးမဲ့ အနေအထားတွေ့ရတာကြောင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကတော့ တိုက်ရိုက် ဝင်တိုက်ခံရမဲ့အန္တရာယ်က လွတ်ကင်းနိုင်ဘွယ်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စူပါမုန်တိုင်းကြီးရဲ့ အရှိန်နဲ့ ပင်လယ်ရေပူနွေးနေမှုတွေကြောင့် ပုံမှန်ထက်ပိုတဲ့ မိုးရေချိန်ထိအောင် မိုးတွေရွာမှာကြောင့် ရေကြီး/မြေပြိုမဲ့ အန္တရာယ်တွေတော့ ရှိနေတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ TSR ရဲ့ လာမဲ့ ၄၈ နာရီခန့်မှန်းချက်ပုံမှာ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့အခါ အနောက်ဘက်ကို သိသိသာသာ ဦးတည်ရာပြောင်းသွားပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ် အလယ်ပိုင်းကို ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်း ခန့်မှန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်၊ အဲသလိုလမ်းကြောင်းကိုဦးတည်မယ်ဆိုရင်တော့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ်၊ လာအို နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား တို့အတွက် ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုရဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
MMWEATHER မှ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA နဲ့ MELOR တို့ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးသတင်းများ ရရှိရင် update များအဖြစ် ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: PARMA, super-typhoon, typhoon, weather.2Comments »
နောက်ဆုံးရတဲ့ သတင်းတွေမှာ PARMA ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အရှေ့ဘက် ၃ဝ၉ မိုင်ခန့်ကိုရောက်ရှိနေပြီး၊ တစ်နာရီကို ၁၃ မိုင်နှုန်းနဲ့
အနောက်မြောက်ဘက်ကို ရွေ့နေပါတယ်။ ကုန်းတွင်းကို ဝင်ရောက်တိုက်တော့မဲ့အချိန် (time of landfall) နီးလာလေလေ အားလျော့လာလေလေ
ဖြစ်နေတာတွေ့ရပေမဲ့ မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့် ၃၁ အထိရှိနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
A. Typhoon 19w (parma), has become more compact as convective bands along its western flank interacted with the topography of the Philippine Islands. TY 19w remainsavery strong typhoon at 120 knots, based on Dvorak estimates from pgtw, rjtd, and knes. Upper level analysis indicates the system is just to the south of an anticyclone
inaregion of low to moderate vertical wind shear. It is tracking along the southwestern periphery ofasubtropical ridge to the northeast.
B. TY 19w is expected to maintainanorthwestward, albeit progressively slower, trajectory through tau 72. During this period, it will gradually weaken as it interacts with the mountain range along the eastern coast of Luzon. By tau 72, it will cross into the Luzon Strait and become quasi-stationary.
C. Beyond tau 72, typhoon Parma is expected to remain quasi- stationary asamid-latitude trough digs in from the northwest and places the system inacol area. The available numeric guidance is split on the extended forecast track with GFS and WBAR steering the vortex sharply to the right and the remainder of the pack towards the
west. This forecast GOES with the westward solution albeit atamuch slower pace.//
18 GMT 09/27/09 9.7N 145.6E 35 Tropical Depression
18 GMT 09/28/09 9.7N 145.6E 35 Tropical Depression
00 GMT 09/28/09 9.4N 144.6E 35 Tropical Depression
06 GMT 09/28/09 9.3N 144.1E 35 Tropical Depression
12 GMT 09/28/09 9.3N 142.8E 40 Tropical Storm
00 GMT 09/29/09 8.2N 139.6E 45 Tropical Storm
06 GMT 09/29/09 7.8N 138.9E 50 Tropical Storm
12 GMT 09/29/09 8.0N 138.2E 50 Tropical Storm
00 GMT 09/30/09 9.0N 136.8E 75 Category 1
06 GMT 09/30/09 9.9N 135.3E 85 Category 1
12 GMT 09/30/09 10.6N 133.9E 85 Category 1
18 GMT 09/30/09 11.3N 132.5E 115 Category 3
18 GMT 10/01/09 11.3N 132.5E 115 Category 3
00 GMT 10/01/09 11.8N 131.1E 150 Category 4
06 GMT 10/01/09 12.4N 129.6E 150 Category 4
12 GMT 10/01/09 13.1N 128.6E 140 Category 4
18 GMT 10/01/09 14.1N 127.3E 140 Category 4
18 GMT 10/02/09 14.1N 127.3E 140 Category 4
00 GMT 10/02/09 14.5N 126.3E 140 Category 4
« ရှေ့က PARMA နောက်မှာ MELOR
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA update #02 »